Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Mmanya mmanu okomoko nke Dọkịta nwanyị mebere
A okomoko mmanu dị ka ọ dịghị ọzọ. Onye dibia bekee na onye ọchụnta ego mara mma mebere, GLISSANT® mmanu onwe onye adịghị ka ọ dịghị ọzọ: dị ọcha, eke, enweghị kemịkalụ siri ike ma ọ bụ homonụ, na ngwugwu na chic, nwere uche, atomizer na-adigide. Ọ na-ada "goop" -y, nri? Goop cherekwa otu a, na nso nso a ha weputara GLISSANT's FDA-Cleared Sea Salt & Caramel Intimate Lubricant na webụsaịtị ha.
Kedu ihe kpatara goop na ndị na-ere ahịa ndị ọzọ nwere mmasị iji GLISSANT® dinara akwa? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe - mmekọahụ na-ere, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ịdị mma mmekọahụ na-eme. A na-atụ anya na ahịa ịdịmma mmekọahụ ga-eru ijeri $45 ka ọ na-erule 2026, yana ahịa mmanu mmanu nke onwe ya ruru ijeri $1.6. Mmanya GLISSANT® adịla njikere ịbụ akụkụ dị mkpa nke mgbawa ahụike mmekọahụ a.
Mkpali maka GLISSANT® sitere na mkpa ụmụ nwanyị. Ahụike mmekọahụ na ịdị mma maka ndị ọrịa ya bụ ihe kacha mkpa maka Dr. Karyn Eilber, onye isi na ngalaba-nchoputa nke GLISSANT®. Ọ hụrụ n'onwe ya ọnụ ọgụgụ na atọ n'ime ụmụ nwanyị anọ na-enwe mgbu mgbe ha na-enwe mmekọahụ, na-abụkarị n'ihi nkụ nke ikpu. Ụmụ nwanyị na-achọ mmanu na-adịghị akpasu iwe nke na-adịghị eme ha ihere iburu n'akpa ha ma ọ bụ pụọ na ọdụ abalị ha. Ọhụụ Dr. Eilber nke ịgwakọta sayensị na herbology iji mepụta mmanu okomoko ghọrọ eziokwu mgbe o ruru na ngalaba-nchoputa Renée Garacochea, onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ ịma mma. Afọ 25+ nke Renée nke ọchụnta ego na imepụta ngwaahịa bụ ihe nkwado zuru oke na nzụlite ahụike na sayensị Dr. Eilber. Ha na-ekekọta "Chanel nke lubes".
Mmiri mmiri nke GLISSANT, FDA-Cleared na-akpachi anya mmanu mmanu hyaluronic acid (onye dị ike moisturizer), L-arginine (na-arụ ọrụ dị mkpa na mmetụta Viagra) na lactic acid (nke dị oke mkpa maka idowe pH nkịtị) yana ihe ndị ọzọ ejiri nlezianya gwọọ botanicals na-ebuli elu. mmekọrịta chiri anya site n'ịkwalite mkpali, ya bụ, mmekọahụ ka mma. Nnu oké osimiri dị ụtọ na ụtọ caramel na-agbakwụnye ọbụna karịa na ahụmahụ GLISSANT®. Ego agbakwunyere: ọ dakọtara condom yana site n'inyere aka idowe pH kacha mma ọ na-ebelata ohere nke ibute ọrịa na iwe.
A na-akwakọba mmanụ aṅụ na-akpachi anya GLISSANT® n'ime ọkaibe, atomizer a na-emegharịgharị nke ị gaghị eche na ọ dị mkpa izo. Karama ahụ na-ekpo ọkụ, nke a na-emegharịgharị na-eme ka ọ dịkwuo mfe…Ịhụnanya. Tinyegharịa. Tinyegharịa.™
Nnyocha ọhụrụ gosipụtara mbelata na nchọpụta ọrịa kansa n'ihi ...